ကမ္ဘာမှမသိသေးသော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရှုခင်းကို ZEKKEI Japan
ရှိမီဇုခဲအိတောင်ကြားလွင်ပြင် ( နိုးမိဇိုးရေတံခွန် ၊ ခါမဲအိဝဂူ ) (ချိဘ)
ချောခိုင်းတောင်ရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာသော နှင်းတွေက မြေအောက်ကို စိမ့်...
အရင်ကတည်းက ပျားရည်စမ်းခရီးရဲ့ ၃၅ %က အာအိုးရှိမ လို့ ပြောနိုင်တဲ့ လူ...
ရေညှိတတ်နေတဲ့ ကျောက်ဆောင်မျက်နှာပြင်ကို များစွာသော အမျှင်တန်းဖြင့် ...
အရှေ့ အနောက် ၁၈ ကီလိုမီတာ ၊ တောင်မြောက် ၂၅ ကီလိုမီတာ၊ တစ်ပတ်လည် ၁၀၀...
ပျမ်းမျှ ၂၀၈ခုသောကျွန်းများက စုပေါင်းရှိနေသောပင်လယ်ဧရိယာကိုဆိုလိုခြ...
ဆောင်းဦး၏လည်ပတ်ခြင်း၊ စက်တင်ဘာတွင် ဂျပန်တွင်လည်ပတ်ချင်စရာအကောင်းဆုံးရှု့ ခ...
( သြဂုတ်လကို အကြံပြုချင်ပါတယ် ) နွေရာသီကို ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်မယ့် ရှုခင်း...
ချိုမြိန်တဲ့ရနံ့ တွေ မှာ ပွေ့ ပိုက်နိုင်တယ်။ မီအဲ ရဲ့ အကြီးဆုံး ၃ ခုဖြစ်တဲ...
အအေးများရှိနေသောရာသီဥတုတွင် ရေပူစမ်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို နွေးထွေးအောင်လုပ်ကြစ...
ဦးတည်ရာမရှိလမ်းလျှောက်မယ်။ ပန်းသီးရောင်လမ်း ( ဟီရိုးစခိ ) ၆ နေရာ ပျော်စရာန...
ဒီလိုနေရာမှာ ဘုရားကြီးက ? အာအိချိခရိုင်ရဲ့ အလွန်ထူးခြားပြီး အရမ်းကြီးမားတဲ...
ဆောင်းတွင်းရဲ့ ဂီဖုသို့! ဆန်းပြားတဲ့ ရေခဲအနုပညာ ( ရေခဲရေတံခွန် ) ရှုခင်း...
အိချိဂါဝမြို့မှာ ဒီလိုရှုခင်းမျိုးက ! ခရီးစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်မှာ အကြံပေး...